Chọtara 175 ~ MATIU, MAK, LUK, JỌN, ỌLU OZI, ROM, 1 KỌRINT, 2 KỌRINT, GALETIA, EFESỌS, FILIPAI, KỌLỌSI, 1 TESALỌNAIKA, 2 TESALỌNAIKA, 1 TIMỌTI, 2 TIMỌTI, TAITỌS, FAILIMON, HIBRU, JEMES, 1 Petro, 2 PITA, 1 JỌN, 2 JỌN, 3 JỌN, JUD, NKPUGHE
Mgbe ndị na-eso ụzọ Jisọs ruru nꞌetiti osimiri, ebili mmiri dị egwu malitere ịmali elu, na-ebugharị ụgbọ mmiri ahụ, nꞌihi na ifufe na-efesi ike.
Atụrụ m egwu gị, nꞌihi na amaara m onye ị bụ. Ya mere eweere m ego gị liere gị nꞌala. Lee ya nꞌebe a!’
Mgbe ọchịagha na-achị narị ndị agha, na ndị agha ya nọ nꞌebe ahụ na-eche Jisọs nche hụrụ ala ọma jijiji a, na ihe nile mere, ha tụrụ oke egwu. Ha kwuru sị, “Nꞌezie, nwoke a bụ Ọkpara Chineke!”
Mgbe ahụ Jisọs gwara ha sị, “Unu atụla egwu. Kama gwanụ ụmụnne m ka ha gaa Galili. Ha ga-ahụ m nꞌebe ahụ.”
Ha nile tụrụ egwu, jụrịtaa onwe ha sị, “Onye ka nwoke a bụ? Nwoke a ifufe na ebili mmiri na-eme ihe o nyere ha nꞌiwu?”
Mgbe Jisọs nụrụ ozi ahụ, ọ gwara Jaịrọs okwu sị, “Atụla egwu. Nanị ihe ị ga-eme bụ inwe okwukwe.”
Pita amakwaghịnụ ihe ọ na-ekwu, nꞌihi na oke egwu tụrụ ha atọ.
Ma ndị na-eso ụzọ ya aghọtaghị ihe ọ na-agwa ha. Ha tụkwara egwu ịgwa ya ka ọ kọwaa ihe ọ na-ekwu.
Mgbe ndị isi nchụaja na ndị ozizi iwu nụrụ ihe Jisọs kwuru, ha bidoro ịchọ ụzọ ha ga-esi gbuo ya. Ha tụrụ egwu na Jisọs pụrụ ime ka ọgba aghara bido, nꞌihi na ọtụtụ mmadụ na-anabata okwu ya nke ọma.
“Ụbọchị ahụ ga-adị nnọọ oke egwu nye ụmụ nwanyị ndị dị ime, na ụmụ nwanyị na-enye ụmụaka ara.
Nꞌezie, nꞌọgbọ nile, Chineke na-emere ndị nile na-atụ egwu ya ebere.
sị, na ya ga-adọpụta anyị site nꞌaka ndị iro anyị mee anyị ka anyị bụrụ ndị ga-efe ya ofufe na-atụghị egwu,
Ha dị ka ụmụntakịrị nọ nꞌama na-egwu egwu, ndị na-akpọ ibe ha na-asị, ‘Anyị na-afụrụ unu opi ma unu adịghị ete egwu, anyị na-abụrụ unu abụ ili ozu ma unu adịghị akwa akwa.’
Mgbe Pita kpụ okwu ahụ nꞌọnụ, igwe ojii kpuchigidere ha. Egwu tụrụ Pita na Jọn na Jemes mgbe igwe ojii ahụ kpuchigidere ha.
Chineke makwaara ọ bụladị ọnụ ọgụgụ agịrị isi dị nꞌisi unu. Unu atụla egwu. Unu dị mkpa karịa ọtụtụ ụmụ nza.
“Ya mere, unu atụla egwu ụmụ m, nꞌihi na Nna unu ahọpụtala unu inye unu alaeze ya.
“Ị dị nnọọ egwu gị obodo Jerusalem! Gị obodo na-egbu ndị amụma na nke na-eji nkume atụgbu ndị nile Chineke zitere inyere gị aka. Lee ka m si gbalịa ịchịkọta ụmụ gị ọnụ, dị ka nne ọkụkọ si achịkọta ụmụ ya nꞌokpuru nku ya, ichebe ha, ma ị chọghị.
“Ọ dịghị anya ọkpara nwoke a, onye jere ịrụ ọrụ nꞌubi bidoro ịlọta nꞌụlọ. Mgbe ọ na-abịa nso ọ nụrụ ụda egwu, nụkwa ụda aṅụrị na ite egwu.
Ọ kpọrọ otu nꞌime ndị na-eje ozi jụọ ya sị, ‘Gịnị mere egwu ji na-ada, ndị mmadụ na-etekwa egwu?’
nꞌihi na atụrụ m egwu. Ị bụ onye afọ tara mmiri bụrụkwa onye na-ewe ihe na-abụghị nke gị, na onye na-ewe ihe ubi nꞌubi nke ị na-akụghị mkpụrụ.’
Ma onye nke ọzọ ahụ na-emebikwa iwu baara ya mba sị ya, “Ị̀ dịghị atụ egwu Chineke? Ọ̀ bụghị otu ụdị ahụhụ ahụ ka anyị nile nọ nꞌime ya?
Jisọs jụrụ ha sị, “Gịnị bụ ihe ndị a unu sị na o mere?” Ha zara ya sị, “Ihe dakwasịrị Jisọs onye Nazaret! Ọ bụ onye amụma rụrụ ọrụ ebube dị iche iche, onye kwukwara okwu na-atụghị egwu. Onye, ọ bụladị Chineke na mmadụ na-asọpụrụ.
Ma o nweghị onye ọ bụla kwupụtara okwu banyere ya. Nꞌihi na ha tụrụ egwu ndị isi ndị Juu.
Ọ bụ nanị nꞌabalị ka egwu ịzọhie ụkwụ dị. Nꞌihi na ọchịchịrị dị.”
“Atụla egwu ada Zayọn! Lee eze gị ka ọ na-abịakwute gị. Ọ na-anọkwasị nꞌelu nwa inyinya ibu!”
Mgbe Pailet nụrụ nke a ọ tụrụ egwu nke ukwuu.
Nꞌanyasị ụbọchị ahụ ndị na-eso ụzọ Jisọs zukọtara nọdụ nꞌime otu ụlọ. Ha mechiri ụzọ nile e si abata nꞌụlọ ahụ nꞌihi na ha na-atụ egwu ihe ndị isi ndị Juu ga-eme ha. Ma na mberede, mgbe ha na-atụghị anya ya, Jisọs batara guzo nꞌetiti ha sị ha, “Udo dịrị unu!”
Ha nile jupụtara nꞌegwu nꞌihi na Chineke mere ka ha mata na ọ nọ nꞌetiti ha. Nꞌihi na ndị ozi Kraịst rụrụ ọrụ ebube dị iche iche.
Mgbe Ananayas nụrụ okwu ndị a, ọ dara nꞌala nwụọ. Ndị nile nụrụ ihe mere tụrụ egwu.
Oke egwu tụrụ nzukọ Kraịst nile. Oke egwu tụkwara ndị nile nụrụ akụkọ ndị a.
ỌLU OZI 5:13
Ndị ọzọ tụrụ egwu ịdịnyere ha. Ma ọtụtụ mmadụ kwuru okwu dị mma banyere ha.
Otu mgbe ahụ, onyeisi agha na ndị agha ya gara nꞌụlọ nsọ ahụ. Ha jidere ndị ozi ahụ kpụta ha nꞌihu nzukọ ndị na-achị achị ahụ. Ma ha ejighị ike mee nke a. Nꞌihi na ha tụrụ egwu na ndị mmadụ ga-atụ ha nkume, ma ọ bụrụ na ha emesie ndị ozi ahụ ike.
Ma ndị Juu ụfọdụ, ndị na-atụ egwu Chineke, bịara buru ozu Stivin, gaa lie ya. Ha kwara akwa nke ukwuu nꞌihi ya.
Site nꞌebe ahụ, Sọl gbapụrụ gaa Jerusalem. Mgbe o ruru Jerusalem, ọ gbalịri ịdịnyere ndị kwere ekwe nọ nꞌebe ahụ. Ma ha tụrụ egwu. Ha ekwenyeghị na ọ bụrụla onye kwere ekwe dị ka ha onwe ha.
ỌLU OZI 9:27
Ma Banabas duuru ya gaa nꞌebe ndị ozi nọ. Ọ kọọrọ ha akụkọ otu Sọl siri zute Onyenwe anyị nꞌụzọ Damaskọs. Ọ kọkwara ha akụkọ otu Sọl siri kwusaa ozi ọma Kraịst na Damaskọs na-atụghị egwu.
ỌLU OZI 9:29
O kwusara okwu nꞌaha Onyenwe anyị na-atụghị egwu. Ya na ndị Juu na-asụ asụsụ Griik rụrịtara ụka. Nꞌihi ya ndị a gbara izu igbu ya.
ỌLU OZI 10:20
Jekwuru ha ngwangwa, sorokwa ha gaa ebe ọ bụla ha na-aga. Atụkwala egwu. Ọ bụ m zitere ha.”
Ya mere, Pọl guzoro ọtọ nꞌetiti ha feere ha aka ya abụọ. Mgbe o kelesịri ha, ọ gwara ha okwu sị, “Unu ndị Izirel, na unu ụmụnna m ndị mba ọzọ na-atụ egwu Chineke. Geenụ m ntị!
Ma ọtụtụ ndị Juu na ndị mba ọzọ na-atụ egwu Chineke sitere nꞌụlọ nzukọ ahụ soro Pọl na Banabas. Ma mgbe ha na-aga nꞌụzọ, Pọl na Banabas riọsịrị ha arịrịọ ike sị ha nọgide nꞌamara Chineke.
ỌLU OZI 16:29
Onyeisi nche ahụ tụrụ egwu nke ukwuu maakwa jijiji. Ọ kpọrọ ka e tinye ọkụ. Mgbe e tinyesịrị ọkụ, ọ gbaara ọsọ daa nꞌụkwụ Pọl na Saịlas.
Ndị uwe ojii ahụ e ziri ozi gara gwa ndị ikpe ahụ ihe Pọl kwuru. Mgbe ha nụrụ na Pọl na Saịlas bụ diala na Rom, ha tụrụ egwu nke ukwuu.
Ụfọdụ ndị Juu gere ntị nꞌokwu ahụ, ghọtara ihe ọ na-ekwu. Ha chegharịrị nabata Onyenwe anyị, ha na ndị Griik na-atụ egwu Chineke na ụmụ nwanyị ụfọdụ a maara aha ha.
Nꞌihi ya, ọ banyere nꞌụlọ nzukọ ndị Juu soro ha kwuritaa okwu. Ụfọdụ ndị nọ nꞌime nzukọ a bụ ndị mba ọzọ na-atụ egwu Chineke. Ụbọchị nile Pọl na-ekwusara ndị nile na-abịakwute ya nꞌọgbọ ọha, ozi ọma.
Onyenwe anyị gwara Pọl okwu nꞌọhụ nꞌotu abalị sị ya, “Atụla egwu Pọl! Kwusie okwu ike, emechila ọnụ gị ma ọlị.
Ndị agha ahụ chọrọ ịpịa ya ihe mere ngwangwa gbapụ mgbe ha nụrụ na Pọl bụ nwa diala Rom. Egwu tụkwara ọchịagha nꞌonwe ya nꞌihi na ọ bụ ya nyere iwu ka e kee ya eriri.
Esemokwu ha bara ụba nke ukwuu. Nꞌihi ya ha bidoro ịdọkpụgharị Pọl nꞌakụkụ nile. Nꞌikpeazụ, ọchịagha tụru egwu na ha ga-emerụ Pọl ahụ ma ọ bụ gbuo ya. Ya mere o nyere iwu ka ndị agha ya jiri ike wepụta Pọl, ka ha kpọlaa ya nꞌụlọ ebe a na-edebe ngwa agha.
Nꞌabalị ahụ, Onyenwe anyị bịakwutere Pọl gwa ya sị, “Atụla egwu Pọl, nꞌihi na dị ka i si gwa ha okwu nꞌebe a otu a ka ị ga-emekwa na Rom.”
Ma mgbe Pọl gara nꞌihu na-ekwu ihe banyere ezi omume na mkpa ọ dịrị mmadụ ijide onwe ya aka nꞌihe ọ bụla ọ na-eme, ya na ihe banyere ụbọchị ikpe nke na-abịa nꞌoge ikpeazụ, egwu jidere Feliks. Ọ gwara Pọl okwu sị ya, “Ị nwere ike ịpụ ugbu a, Aga m akpọkwa gị nꞌoge ọzọ mgbe m nwetara ohere.”
Emesịa anyị jiri ụdọ kee ụgbọ mmiri ahụ ime ka o sie ike karịa. Ndị na-anya ụgbọ ahụ tụrụ egwu na ikuku ga-eburu ụgbọ anyị gaa nꞌọnụ mmiri na-achị ọkụ nke dị nꞌAfrika. Ha wedatara akwa e kobere nꞌelu, nke na-enyere ikuku aka ibu ụgbọ mmiri. Emesịa, ha sooro ikuku mmiri ahụ na-aga.
ỌLU OZI 28:31
na-akọrọ ha, na-atụghị egwu, ihe banyere alaeze Chineke na banyere Onyenwe anyị Jisọs Kraịst. Ọ dịkwaghị onye ọ bụla gbalịrị igbochi ya.
Nꞌihi na Onyenwe anyị na-aga ikpe ụwa a ikpe. Ikpe ahụ ga-adịkwa egwu. Ọ gaekpe ya ọsịịsọ.”
Nke ahụ bụ eziokwu. Ma cheta na a nyakapụrụ ha nꞌihi na ha enweghị okwukwe. Ma ị nọ nꞌebe ahụ nꞌihi na i kweere. Ya mere anyala isi banyere ọnọdụ gị, kama tụọ egwu.
2 KỌRINT 3:12
Ya mere, ebe anyị nwere olileanya na ebube ụzọ ọhụrụ a agaghị agwụ agwụ, anyị nwere ike ugbu a ikwusa ozi ọma na-atụghị egwu.
Nꞌihi na mgbe o buru ụzọ bịa Antiọk, Pita na ụmụnna anyị ndị a na-ebighị ugwu, na-erikọta nri. Ma mgbe ndị Juu, ndị Jemes zitere, bịaruru Antiọk, Pita ekwekwaghị iso ndị mba ọzọ ahụ rikọọ nri, nꞌihi na ọ na-atụ egwu ihe ndị Juu a bu iwu nꞌisi, ndị sị na ọ dị mkpa ibi mmadụ ugwu tupuu a zọpụta ya, ga-ekwu.
Ọ bụ ihe dị egwu na ihe dị njọ mmadụ ahụ mere ihe ndị a ịdaba nꞌaka Chineke dị ndụ.
Nne na nna Mosisi zipụtara okwukwe mgbe ha mụrụ Mosisi. Ha zoro ya ọnwa atọ nꞌihi na ọ bụ nwa mara mma. Ha atụkwaghị egwu iwu nke eze ala Ijipti bụ Fero nyere.
Okwukwe ka Mosisi ji hapu Ijipti. Ọ tụghị egwu iwe eze nꞌihi na ọ dị ka ọ na-ahụ Chineke anya, na Chineke nọnyere ya mgbe nile.
Nꞌihi na ụfọdụ ndị afọ tara mmiri, ndị na-amaghị Chineke, abatala nꞌetiti anyị. Ndị na-ezi na onye Kraịst ọ bụla pụrụ ibi ụdị ndụ ọ bụla ọ chọrọ na-atụghị egwu ịta ahụhụ nke Chineke na-enye. Ha ajụla Jisọs Kraịst, Nna anyị ukwu na Onyenwe anyị. Ndị a bụkwa ndị ahụ akwụkwọ nsọ gbararị ama banyere ọmụma ikpe dị na-eche ha.
Ìhè dị ukwuu, nke na-egbu nweghenweghe dị ka mkpụrụ mmiri si nꞌahụ onye ahụ nọkwasịrị nꞌocheeze ahụ na-achapụta. Eke na egwurugwu, nke na-egbukwa amụma, gbara ocheeze ahụ gburugburu.
Ụwa nile were oke iwe megide gị, ma ugbu a bụ oge gị iweso ha iwe dị ọkụ. Ugbu a bụ oge ikpe ndị nwụrụ anwụ ikpe, na ịkwụghachi ndị na-ejere gị ozi ụgwọ ọrụ ha, bụ ndị nile na-ezisa ozi ọma gị na ndị gị nile, bụ ndị na-atụ egwu gị. Ndị dị nta na ndị dị ukwuu. Oge eruokwala mgbe ịla nꞌiyi ga-abịakwasịkwa ndị nile e siri nꞌaka ha webata mmebi nꞌebe ihe Chineke kere dị.”
Onye ga-aghara ịtụ gị egwu, Onyenwe anyị,Onye ga-agharakwa ito aha gị?Nꞌihi na ọ bụ nanị gị dị nsọMba nile ga-abịakwa ịkpọ isi ala nꞌihu gị,nꞌihi na e meela ka ọrụ ezi omume gị pụta ìhè.
Ejikwa m anya m hụ na nwanyị ahụ aṅụjuola ọbara ndị nsọ afọ, ya na ọbara ndị àma Jisọs o gburu. Elere m ya anya nꞌoke egwu.
Ya mere, ndị ahia ahụ ghọrọ ọgaranya site nꞌiresi ndị obodo Babilọn ahia ga-eguzo nꞌebe dị anya na-atụ egwu ihe ga-eme ha onwe ha, ma na-akwa akwa na-etikwa mkpu na-asị,
Ọ dịghị mgbe ọzọ ụzụ egwu ga-adị nꞌebe ahụ. A gaghị anụkwa olu oja, na une, na ụbọ akwara na ndị na-akpọ ha. A gaghị ahụkwa ndị nka ọ bụla nꞌime ya. A gaghị ahụkwa ndị na-akwọ ọka ma ọ bụ igwe e ji akwọ ọka nꞌime ya.
Otu olu sitekwara nꞌocheeze ahụ kwuo okwu sị, “Toonụ Chineke unu ndị ohu ya, ndị ukwu na ndị nta, unu ndị na-atụ egwu ya.”